set - Synonyms of set | Antonyms of set | Definition of set | Example of set | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for set
Top 30 analogous words or synonyms for set
မြန်မာ လက်ထပ် ထိမ်းမြားခြင်း Parkroyal ဟိုတယ်၏ မင်္ဂလာဝန်ဆောင်မှုအစီအစဉ်များ အနေဖြင့် မုန့် ၃ မျိုး၊ လက်ဖက်ရည် သို့မဟုတ် ကော်ဖီ၊ ရေခဲမုန့်တို့ပါဝင် သော Sapphire Package အတွက် လူတစ်ဦးစာလျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ငါးဒေါ်လာ၊ မုန့် ၄ မျိုး၊ လက်ဖက်ရည် သို့မဟုတ် ကော်ဖီ၊ ရေခဲမုန့်ပါဝင်သော ျွကဘပ Package အတွက် လူတစ်ဦးစာ လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆ ဒေါ် လာ၊ မုန့် ၅ မျိုး၊ လက်ဖက်ရည် သို့ မဟုတ် ကော်ဖီ၊ ရေခဲမုန့်တို့ပါဝင် သော Diamond Package အတွက် လူတစ်ဦးစာလျှင် အမေရိ ကန်ဒေါ်လာ ၇ ဒေါ် သတ်မှတ် ထားကြောင်းသိရသည်။ ထို Package အပြင် Set Menu များဖြစ် သော Asian Set ၊ Chinese Set ၊ Myanmar Set ၊ Thai Set ၊ Western Set နှင့် Buffet Menu တို့အပြင် Cooktail Menu အစရှိ သော မီနူးများမှ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ် နိုင်ရန် စီစဉ်ထားသည်။ Parkroyal ဟိုတယ်မှ လူဦးရေ ၃ဝဝ အထက် မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲများအတွက် နောက် ခံစာသား အင်္ဂလိပ် သို့မဟုတ် မြန်မာ၊ ပန်းအလှပြင်ခြင်း၊ ရေခဲပန်း ပု၊ မင်္ဂလာကိတ်၊နံနက်စာအပါအဝင် တစ်ညတာတည်းခိုခွင့်နှင့် မင်္ဂလာ အပြင်အဆင်ကားနှင့် အကြို သို့မ ဟုတ် အပို့တို့ကို လက်ဖွဲ့အဖြစ် ပံ့ပိုး သွားမည်ဖြစ်သည်။
မြန်မာအက္ခရာ Another set of digits from zero to nine is used in the Shan language.
ထရိုင်ဂူလယ် (ကြယ်စုတန်း) The official constellation boundaries, as set by Eugène Delporte in 1930, are defined as
SIMBAD SIMBAD ဆိုသည်မှာ Set of Identifications, Measurements, and Bibliography for Astronomical Data အားရည်ညွန်းပြီး
ရိုးရိုးအစုသီအိုရီ ရိုးရိုး အစုသီအိုရီ (naive set theory) ဆိုသည်မှာ (သင်္ချာပညာတွင် အဓိက အသုံးပြုသည့်) အစု (set) များကို ပုံစံတကျ ဖြစ်ရန် ကြိုးပမ်းသည့် ကနဦး သီအိုရီ ဖြစ်သည်။ သင်္ချာပညာ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ကို သင်္ချာယုတ္တိဗေဒနှင့် အစုသီအိုရီကို အသုံးပြု၍ ရှင်းလင်းခြင်း (reduction) ကို ဒီဒီကင် (Dedekind)၊ ဖရီဂယ် (Frege) နှင့် ကန်တာ (Cantor) တို့ ဦးဆောင်၍ ၁၈၇၀ နှင် ၁၈၉၅ ကြားတွင် လုပ်ဆောင်ခဲ့ရာ ဤ ရိုးရိုး အစုသီအိုရီ ပေါ်ထွန်းခဲ့သည်။ သို့သော် ဤသီအိုရီ အစပျိုးပြီး မကြာမီပင် ရပ်ဆဲလ် (Russell) အစရှိသူတို့က ၎င်းသီအိုရီတွင်း ရှေ့နောက်မညီမှု (paradox) များကို တွေ့ရှိလာရာ ဤသီအိုရီအစား ပိုမိုတိကျ စူးစိုက်သည့် အက်ဆီယမ်ကျကျ အစုသီအိုရီ (axiomatic set theory) များကို ထုတ်ဖော်သုံးစွဲလာရသည်။
အစုသီအိုရီ ဘာသာရပ်များတွင် သီအိုရီတစ်ခုကို အစပျိုးသူ ပညာရှင် အများအပြား ရှိလေ့ရှိသော်လည်း ခေတ်ပေါ်အစုသီအိုရီကို ဂျာမန်သင်္ချာပညာရှင် ဂျော့ ကန်တာ (George Cantor) တစ်ဦးတည်းက အဓိက အစပျိုးခဲ့သည်ဟု ဆိုလေ့ရှိသည်။ နှစ်ဆယ်ရာစုဦးပိုင်း၌ အစုသီအိုရီဆိုင်ရာ paradox ခေါ် အဓိပ္ပာယ်မဲ့ယောင် သဟဇာတ မကိုက်ညီမှုများ မတွေ့ရှိခင်အထိ ရိုးရိုးအစု သီအိုရီ (naive set theory) ဖြင့်သာ လုံလောက်ခဲ့သော်လည်း၊ ၎င်း သဟဇာတ မကိုက်ညီမှု ပြဿနာများကြောင့် နောက်ပိုင်းတွင် အက်ဆီယမ်ကျကျ အစုသီအိုရီ (axiomatic set theory) လိုအပ်လာသည်။ ၎င်း အက်ဆီယမ်စနစ်များအနက် ဇာမလို-ဖရန်ကယ် အက်ဆီယမ်များ (Zermelo–Fraenkel axioms) နှင့် ရွေးချယ်နိုင်စွမ်း အက်ဆီယမ် (axiom of choice) ကို ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားသည့် ZFC ဟု အတိုကောက်ခေါ်သည့် စနစ်မှာ အသုံးအများဆုံး ဖြစ်သည်။
ဟေလီယိုစဖီးယား In October 2010, significant changes were detected in the ribbon after6months, based on the second set of IBEX observations. No bow shock was detected in 2012.
ကိန်း အစုသီအိုရီရှိ အစုအရွယ်အစား (cardinality ofaset) သဘောအရဆိုလျှင် ကိန်းစစ်စုအတွင်းရှိ ကိန်း “"အားလုံးနီးပါး"” (almost all) မှာ အီရာရှင်နယ်ကိန်းများဖြစ်ကြသည်။ (ဤတွင် “"အားလုံးနီးပါး"” ဟူသောအသုံးမှာ သာမန်မြန်မာစာ အသုံးမဟုတ်ဘဲ အစုသီအိုရီနှင့် အတိုင်းအတာသီအိုရီ (measure theory) ဆိုင်ရာ တိကျသည့် အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက် ရှိသည်။)
အပိုလို ၁၁ The John F. Kennedy Library set upaFlash website that rebroadcasts the transmissions of Apollo 11 from launch to landing on the Moon.